तपाइँको ब्यापार आउटरीचलाई कसरी कुशलतापूर्वक पुनर्गठन गर्ने - सामुदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
कसरी तपाईंको व्यवसाय आउटरीच कुशलतापूर्वक पुनर्गठन गर्न
सम्पादकको पिक अप्रिल 3, 2021 अप्रिल 1, 2021 भिक्टोरिया स्मिथ B2B, ब्लग, व्यापार, सम्पादकको पिक, ग्लोबल थोक अनलाइन, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, प्रविधि, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
पैसा बचत गर्न र अधिक रिटर्न प्राप्त गर्न आउटसोर्स कोल्ड कलिंग।
बलियो र चाखलाग्दो वेब उपस्थिति कायम राख्नुहोस्।
अद्वितीय अभियानहरू सिर्जना गर्न प्रभावकारीहरू र अन्य कम्पनीहरूसँग साझेदार।
संसाधनहरूको उपलब्धता जुन इन्टरनेटले अब प्रदान गर्‍यो कि कसरी ब्यापार ग्राहकहरुमा पुग्ने गरी परिवर्तन भएको छ। विगतमा, तपाईंको व्यवसायको 'आउटरीच रणनीति मार्केटिंगको परम्परागत प्रकारहरूमा सीमित हुन सक्छ, तर त्यो अब त्यस्तो छैन। अनलाइन सेवाहरूको विस्तारले अब तपाईंको व्यवसायलाई नयाँ तरिकाहरू प्रदान गर्दछ जुन विश्वको कुनै पनि ठाउँमा उपभोक्ताहरूसम्म पुग्न सक्दछ। निम्न जानकारी पुन: संरचना गर्न वा तपाईंको आउटरीच प्रयास विस्तार गर्न एक गाइडको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
विगतमा, उपभोक्ताहरूलाई चिसो कल गर्नका लागि बिक्री सहयोगीहरूको टोली चाहिन्छ जसले वेतन र लाभहरू ल्याउँदछ कि तिनीहरूले नतिजा उत्पादन गरे कि गर्दैनन्।
चिसो कलहरु तपाई को लागी काम गर्नुहोस्
विगतमा, उपभोक्ताहरूलाई चिसो कल गर्नका लागि बिक्री सहयोगीहरूको टोली चाहिन्छ जसले वेतन र लाभहरू ल्याउँदछ कि तिनीहरूले नतिजा उत्पादन गरे कि गर्दैनन्। तपाईं त्यो खर्च आधा मा कटौती गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको लगानीमा राम्रो प्रतिफल पाउनुहुनेछ जब तपाईं यस सेवालाई आउटबाउन्ड कल सेन्टरहरूमा आउटसोर्स गर्नुहुन्छ। तपाईंसँग तपाईंको एक्स्पोजरमा एक अनुभवी बिक्री टीम छ जसले तपाईंलाई ती बाहिर जाने कलहरू गर्नेछ र तपाईंलाई न्यूनतम शुल्क मात्र लिनेछ। नतिजा तपाईको आफ्नै टोलीमा भाँडा बिना दिन प्रति दिन बढी बिक्री हुन्छ। यो साना व्यवसायहरूको लागि आदर्श हो जोसँग आफ्नो बिक्री स्टाफहरू भाँडा लिनको लागि खाली ठाउँ वा वित्तीय स्वतन्त्रता हुँदैन।
नियमित वेब उपस्थिति राख्नुहोस्
व्यवसायहरूसँग जुन ब्लगको साथ वेबसाइटहरू छन् र सामाजिक मिडिया पोष्टहरू मर्मत गर्छन् उनीहरूको शक्तिको पूर्ण क्षमतामा प्रयोग गर्दैनन्। यदि तपाईं नियमित ब्लग पोष्टहरू सिर्जना गर्नुहुन्न र ती पोस्टहरू तपाईंको ब्रान्डको सोशल मिडिया खाताहरूमा लगातार साझा गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं यी स्रोतहरूले प्रदान गर्ने आउटरीच क्षमतामा बाँचिरहेका छैनन्। तपाईको व्यक्तिगत हितको लागि तपाईको व्यक्तिगत रुचिमा हुन सक्छ जुन ब्लग पोष्टहरू लेख्न र तपाइँको सामाजिक मिडिया खाताहरू प्रबन्ध गर्न पूर्ण जिम्मेवार छ। यो सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईं यी संसाधनहरूलाई सकेसम्म कुशलताका साथ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। सामाजिक मिडिया सगाई वेबसाइट ट्राफिकसँग जोडिएको हुनाले यी दुबै क्षेत्रहरूमा दक्ष कोहीले तपाईंलाई आफ्नो व्यवसायमा बढि उपभोक्ताहरू ड्राइभ गर्न मद्दत गर्न सक्छ। निश्चित गर्नुहोस् तपाईंको वेबसाइटले सुरक्षा अपडेट गर्‍यो दुबै कम्पनी र ग्राहकहरुको रक्षा गर्न। तपाईंको वेबसाइट सुरक्षित गर्नाले ग्राहकहरूलाई तपाईंको कम्पनीको लागि एक जानकारी डाइरेक्टरी मात्र नभई यो मञ्चको रूपमा बढी व्यस्त हुन प्रोत्साहित गर्न सक्छ।
पोडकास्टहरूमा अतिथि उपस्थितिहरू बनाउनुहोस्
यदि तपाईं सानो व्यवसाय मालिक हुनुहुन्छ भने, तपाईंसँग आफ्नै पोडकास्ट शो प्रबन्ध गर्न समय हुने सम्भावना छैन। जहाँसम्म, यसको मतलब यो होइन कि तपाईं आफ्नो उद्योगको फाइदाको लागि यो उद्योग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। पोडकास्ट व्यक्तित्वहरू सम्पर्क गर्नुहोस् उनीहरूको कार्यक्रमहरूमा पाहुनाको रूपमा देखा पर्ने बारे सोधपुछ गर्न। यसको लागि तपाइँको तर्फबाट एक न्यूनतम प्रतिबद्धता आवश्यक पर्दछ, कति पाहुनाहरू तपाइँले पाहुना हाजिर प्रस्ताव गर्न पाउनुभयो भन्नेमा निर्भर रहँदै। आदर्श रूपमा, उत्तम पोडकास्टहरू ती हुन् जुन नियमित रूपमा तपाईंको उद्योग वा उत्पादनहरूको बारेमा छलफल गर्छन्। यसले तपाईंलाई दर्शकहरूमा पुग्न अवसर प्रदान गर्दछ जुन तपाईंको उत्पादनहरूमा पहिले नै रुचि राख्दछ। केवल निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँसँग भन्न केहि चाखलाग्दो छ किनभने अधिक आकर्षक अन्तर्वार्ता दिनेछ तपाईंको ब्रान्डमा चासो जगाउनुहोस्.
यदि तपाईंले कुनै सामाजिक मिडिया प्लेटफर्ममा समय बिताउनु भएको छ भने, तपाईंले पक्कै पनि अभिनेता वा मोडेलहरू तिनीहरूको नाममा ब्रान्ड प्रमोशन गरेको देख्नुहुनेछ।
सामाजिक मिडिया प्रभावकारीहरूको प्रयोग गर्नुहोस्
यदि तपाईंले कुनै सामाजिक मिडिया प्लेटफर्ममा समय बिताउनु भएको छ भने, तपाईंले पक्कै पनि अभिनेता वा मोडेलहरू तिनीहरूको नाममा ब्रान्ड प्रमोशन गरेको देख्नुहुनेछ। तिनीहरू नि: शुल्क यो गरिरहेका छैनन् र धेरै केसहरूमा तिनीहरूले सायद आफैंले यो उत्पादन कहिल्यै प्रयोग गरेका छैनन्। यद्यपि ठूला सामाजिक मिडिया अनुगमन भएका व्यक्तिहरू उनीहरूको प्रभावको लागि अन्धा हुँदैनन्, र उनीहरूले उनीहरूको प्रभावलाई तपाईंको व्यवसायको विस्तारमा मद्दत गर्न प्रयोग गर्न इच्छुक छन्। शुल्कको लागि, तीनिहरू तपाइँको ब्रान्डको उत्पादनहरू वा सेवाहरू उनीहरूका अनुयायीहरूलाई प्रमोट गर्छन्। जब शुल्क फरक फरक हुन्छ, तपाईंले सामान्यतया उनीहरूले अनुगमन गर्ने अनुयायीहरूको संख्याको आधारमा प्रभावकर्ताहरूलाई भुक्तान गर्न अपेक्षा गर्नुपर्दछ।
अन्य व्यवसायको साथ साझेदार
त्यहाँ बिभिन्न तरिकाहरू छन् जुन तपाईं अर्को व्यवसायसँग साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ जसले तपाईंलाई प्रत्येकलाई एक अर्काको उत्पाद नयाँ श्रोताको लागि पर्दाफास गर्न मद्दत गर्दछ। यो एक राम्रो विचार हो एक ब्यापारसँग साझेदारी गर्ने जुन तपाइँले बेच्नको सम्बन्धित उत्पादनहरू बेच्छ जुन उही डेमोग्राफिकमा रहनको लागि हो। उदाहरणको लागि, यदि तपाइँ सौन्दर्य प्रसाधनहरू बेच्नुहुन्छ, तपाइँ स्किनकेयर उत्पादनहरू बेच्ने कम्पनीसँग साझेदारी गर्न चाहानुहुन्छ। तपाइँ एक ठूलो विज्ञापन अभियानको साथ साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँको समग्र मार्केटिंग लागतहरू काट्न। अर्को विकल्प भनेको प्रत्येक अन्यको ब्लगका लागि अतिथि पोष्टहरू लेख्नु हो। तपाईं एक अर्काको सामाजिक मिडिया पृष्ठहरूमा लिंकहरू साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको पहुँच त्यस मार्गमा विस्तार गर्न। एकचोटि तपाईंले अर्को व्यवसाय फेला पार्नुभयो जुन तपाईं साझेदारी साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंले एक अर्काको विस्तार विस्तार गर्ने अन्य धेरै तरिकाहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
यहाँ उल्लेख गरीएका केहि आउटरीच विकल्पहरूले तपाईंको व्यवसायको लागि राम्रो काम गर्दैनन्, तर तपाईंले सकेसम्म धेरै अवसरहरूको प्रयास गर्नुपर्दछ। तपाईले प्रयास नगरेसम्म के काम गर्ने भनेर बताउने कुनै तरिका छैन। बिभिन्न भिन्न आउटरीच अवसरहरूको संयोजन गरेर, तपाईं आफ्नो व्यवसायको विस्तार गर्नुहुनेछ 'अझ त्यो पुग्नको लागि। थप रूपमा, तपाई प्रक्रियामा अधिक चिन्न योग्य ब्रान्ड सिर्जना गर्नुहुनेछ।
ब्रान्डिङ व्यापार व्यापार रणनीतिहरु सांप्रदायिक समाचार मार्केटिङ आउटरीच
भिक्टोरिया स्मिथ एक स्वतन्त्र लेखक हुन् जसले व्यापार र वित्तमा मद्दत गरे, खाना पकाउन र स्वस्थताको लागि जुनसुकै किसिमको। उनी अस्टिन, TX मा बस्छिन् जहाँ उनी हाल उनको MBA तर्फ काम गरिरहेकी छन्।
नेतृत्व उत्पादन अभियान के हो?
किन तपाईंले वाइन वायु गर्नु पर्छ?
प्रारम्भिक बाल्यकालको शिक्षा कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ र आमा वा बुबाको रूपमा तपाईं कसरी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ
आईआरएस ले कर भुक्तानी गर्नेहरूलाई जून १ De डेडलाईनको विदेशमा काम गर्ने र कार्य गर्ने सम्झना गराउँछ